Torohevitra momba ny famolavolana lalao 10 ho an'ny mpamorona vaovao la-manette.com
3 décembre 2021 2 décembre 2021 feh Mathilde Grimard
Tena ilaina ho an'ireo vaovao amin'ny fivoaran'ny lalao ny manala ny angano maro ary mifanatrika amin'ny zava-misy. Voalohany indrindra, fampandrosoana lalao tsy misy ifandraisany amin'ny coding sarotra. Fa kosa, ny fahatakarana fototra momba ny dingana sy ny fitsipika.
Ny curve fianarana ho an'ny famolavolana lalao sy ny fampandrosoana dia mety ho samy hafa ho an'ny olona samihafa. Saingy misy ny zavatra sasany tokony hokarakarain'ny mpamorona vaovao amin'ny fomba mirindra indrindra.
Mazava ho azy fa asa mahafinaritra ny famolavolana sy famolavolana lalao. Raha ny marina, manana fahafahana hampihatra ny talentanao ara-javakanto sy ara-teknika ianao. Ankoatra izany, izany dia ahafahanao mivelona tsara raha manao izany tsara ianao.
Raha anisan'ireo mpamorona sy mpamorona lalao video vaovao ianao izay manantena ny hahomby amin'ny sehatry ny fampandrosoana lalao, ireto misy torohevitra folo afaka manampy anao:
1. Mitadiava hevitra tany am-boalohany
Afaka mampiasa singa samihafa ianao mba hampiavaka ny lalaonao. Mety ho ny endri-tsoratra, ny interface na ny tetika. Noho izany, mila mahita ny hook izay tsy hanintona ny mpanjifa fotsiny ianao, fa hitazona azy ireo hatrany am-boalohany.
Ny fitadiavana ny hevitra mety amin'ny fampivoarana lalao dia iray amin'ireo zavatra voalohany tokony hodinihinao mba hahombiazana sy hahafinaritra ny lalaonao.
Raha azo atao, raiso ny fanampian'ny mpamorona lalao UI UX matihanina izay afaka manampy anao hamantatra ny fika ho an'ny vokatra gaming ho avy.
2. Manomboka kely
Raha tena te ho mahay mamorona ianao lalao mahagaga, tsy maintsy miezaka hahazo traikefa aloha ianao. Ny fomba tsara indrindra hanaovana izany dia ny manomboka amin'ny kely ary mandroso ny lalanao rehefa mahazo ny traikefa ilainao ianao.
Tsarovy fa vaovao amin'ny fivoaran'ny lalao ianao ary tsy mahavita sangan'asa na dia manandrana aza. Ny tanjonao lehibe noho izany dia ny hamita ny lalao voalohany ary hampiakatra azy.
Vakio ihany koa: Serivisy mpanjifa orinasa Videotron
Misafidiana fomba minimalista sy tsotra ho an'ny famolavolana lalao ataonao. Mifantoha amin'ny traikefa fa tsy ny vokatra. Tsy hitondra anao na aiza na aiza ny fanandramana endrika sarotra.
3. Eritrereto ireo mpankafy lalao video
Tsara ny mampiasa teknolojia sy UX samihafa amin'ny lalaonao mba hampientanentana azy. Saingy tadidio foana ny mpilalaonao rehefa manao izany. Mora kivy ny mpilalao raha sarotra loatra ny interface na ny sakafo.
Atombohy amin'ny zavatra tsotra foana ary ataovy tsotra mandritra ny lalao. Mahareta amin'izay ataonao mba hanana traikefa amin'ny fitetezana milamina ireo tia lalao.
4. Ataovy tsotra ny fitsipika
Rehefa mamolavola ny lalao voalohany ianao dia tadidio ny traikefan'ny mpampiasa. Zava-dehibe izany raha tena tianao hankafizin'ny mpilalao ny lalaonao. Ataovy tsotra sy mora azo ary tsy miovaova ny fitsipika mba ho tonga lafatra ny lalaonao.
Raha tsotra ny zava-drehetra ary tsy sarotra loatra ny fitsipika tsy maintsy arahin'ny mpilalao, dia tsy ho kivy ny mpilalao ary hahita tsikelikely ny gadonany ny lalaonao.
5. Diniho ny famolavolana feo
Ataovy azo antoka fa mipoitra amin'ny fotoana mety ny feo mety mandritra ny fotoam-pilalaovana. Tena zava-dehibe ny famolavolana feo tonga lafatra, na lalao tsotra izany na lalao 3D. Ny iray amin'ireo zavatra tsara indrindra momba ny vokatry ny feo dia ny ahafahany manampy ny mpilalao amin'ny fizotry ny fitetezana.
Ho fanampin'izany, ny fiantraikany amin'ny feo mahafinaritra dia mandeha lavitra amin'ny famoronana tontolo ilaina amin'ny tantara. Noho izany, ny fialam-boly lalao dia lasa manintona kokoa ary mahafinaritra ho an'ny mpanjifa.
Vakio ihany koa: 3 emulators Nintendo Switch tsara indrindra hilalao ny lalao tianao indrindra amin'ny PC
Afaka mampiasa a rindrambaiko fanovana video ho an'ity tanjona ity, satria misy fitaovana maro miaraka amin'ny tranomboky misy tahiry misy karazana mozika, sary sy vokatra. Ny famolavolana feo misy amin'ireo fitaovana ireo dia azo antoka fa hahatonga ny filalaovanao ho mahasarika kokoa.
6. Araho maso ny sary 3D
Tsy maintsy manana hevitra mazava momba ny sary 3D ianao. Zava-dehibe izany satria amin'izao fotoana izao dia saika tsy azo atao ny mamorona lalao video tsy misy sary. Ny fampiasana sary 3D dia hahatonga ny lalao video ho tena mibahan-toerana sy mahasarika kokoa.
Raha te ho mpandrindra lalao marani-tsaina sy matihanina ianao, dia mila mahafantatra ny matematika sy ny sary izay manohana ny ankamaroan'ny lalao. Marina indrindra izany ho an'ireo izay tsy mikasa ny hampiasa milina lalao efa vita.
7. Araho ireo mpamorona lalao malaza hafa
Afaka manaraka sy mahazo aingam-panahy avy amin'ireo mpamorona lalao malaza hafa ianao. Ny tsenan'ny lalao dia tena lehibe, izay manome fahafahana ny mpamorona vaovao hifandray amin'ny namana sy matihanina maro.
Afaka manampy ireo mpamorona lalao vaovao hanaraka ny fahana mivantana ataon'ireo mpamorona malaza ary hahomby mandritra ny taona maro.
8. Miasa amin'ny fifandraisanao
Ny fifandraisana dia zavatra tsy odian'ny mpamorona lalao amin'ny ankapobeny. Fa ny zava-dehibe dia, raha te ho mpandrindra lalao tena mahomby ianao dia tsy maintsy afaka maneho ny vinao ary miara-miasa amin'ny mpikambana hafa ao amin'ny ekipa. Anisan'izany ny mpitantana, mpamorona sary, mpanao dokambarotra ary manampahaizana momba ny feo.
9. Tehirizo ny singa mahafinaritra
Ny tanjona fototra amin'ny famoronana lalao dia fahafinaretana madio sy tsotra. matihanina lalao video mitady fandosirana sy fialamboly foana. Ny ankamaroan'ny mpilalao dia te hankafy ny fotoam-pilalaovany fotsiny.
Vakio ihany koa: Ahoana ny fanatsarana ny lalao DualSense an'ny PS5 toa ny Fortnite sy NBA 2K21
Tokony ho takatrao ihany koa fa ny olona dia milalao lalao amin'ny fotoanany, izay tena sarobidy. Noho izany, aorian'ny andro lava niasana na taorian'ny fianarana, ny olona sy ny tanora dia tsy afaka mandany ny fotoanany amin'ny lalao izay tsy manome fahafinaretana azy.
10. Tanjona ny hampalaza ny lalao
Mitaky varotra araka ny tokony ho izy izany. Saingy alohan'izany dia mila mahafantatra izay mety tsara amin'ny indostrian'ny lalao ianao. Ny haavon'ny famolavolana sy ny endri-tsoratra mifanaraka amin'ny meme, ny zava-bita ary ny lohahevitra mafana, ary izy ireo dia hanome vahana ny lalaonao, izay tokony hiparitaka.
Raha te hahomby amin'ny famolavolana lalao, mianatra fahaiza-manao isan-karazany. Mahereza ary miofana tsy tapaka. Amin'ny fanarahana ara-pivavahana ireo dingana voalaza etsy ambony, dia ho tonga dingana iray manakaiky ny fahombiazana ianao.
Ny lisitry ny Monster feno sy ny angona Micromon - 18 Janoary 2022
Maty noho ny kaody andro (Janoary 2022) - 18 Janoary 2022
Ny lalao cyberpunk 10 tsara indrindra ho an'ny telefaona sy takelaka Android - 18 Janoary 2022
Ahoana ny fanavaozana ny TomTom GPS maimaim-poana
Ahoana ny fampitahana ny fividianana Activision Blizzard an'i Microsoft amin'ny fividianana fialamboly lehibe hafa